नेपालगञ्‍जबाट मुगु जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा २२ को मृ’त्यु – Paluwa Khabar
नेपालगञ्‍जबाट मुगु जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा २२ को मृ’त्यु
अषोज २६, २०७८ मंगलबार 78
जिल्लाको छाँयानाथ रारा गाउँपालिका ७ पिनागाउँमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तिमा १३ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने अन्य थपिने क्रम जारी छ र हाल्को। अबस्था सम्म २२ पुगेको जानकारी आएको छ ।
अन्य १८ जना घाइते भएका छन्। घाइतेको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले बताएको छ। अप्ठ्यारो भिरालोबाटोका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको प्राम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।
नेपालगञ्‍जबाट मुगु सदरमुकाम गमगढी जाँदै गरेको भे १ ख ६७ नम्बरको बस मंगलबार दिउँसो २ बजेतिर दुर्घटना भएको हो। अहिले घाइतेहरुको उद्दारकार्य जारी छ। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ । (तस्वीर : सांकेतिक)
योपनि : काठमाडौ । दुर्घ`टनामा ज्यान गु`माएका २४ वर्षीया सुजा चौधरी बिएससी नर्सिङ चौथो वर्षमा अध्यनरत थिइन्। उनकी बहिनी २० वर्षीया लिजा पनि कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा बिडिएस पढ्दै थिइन्। घान्द्रुक दुर्घ`टनामा उनीहरू दिदीबहिनी नै परे।
आमा पार्वती र बुबा बाबुरामका सन्तान यी दुई छोरी मात्र हुन्। दुर्घ`टना भएको खबर पाउनासाथ उनीहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर पोखरा झरे। दुर्घ`टनामा दुवै छोरी गु`मा`एको आमा पार्वतीलाई थाहा थिएन। छोरी दुर्घ`टनामा परेको खबरले मात्रै पनि उनी आत्तिएकी थिइन्। अस्पतालको आक`स्मिक कक्षअगाडि अ`सह्य पी`डा पो`खिरहेकी थिइन्।
Prevनेपालगञ्‍जबाट मुगु जाँदै गरेको बस दुर्घटना हुँदा १६ को मृ’त्यु
Nextतपाईको आजको दिन कस्तो ?आज २७गतेको भाग्य फल हेरि दिनको शुरूवात गरौ ।
खुसीको खबर यति गतेबाट ल’ कडाउन खुल्दै, भर्खरै सरकारबाट आयो यस्तो जा’ नकारी ,हे’ र्नुहोस्
बाघ निगरानिका लागि क्यामरा जडान
१.	नेपाल प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, आवेदन समय कहिलेसम्म दिइसक्नुपर्ने ! (दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रसहित)हेर्नुहोस (82)
२.	आधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु’खद् नि’धन (भिडियो हेर्नुस्) (81)
३.	दशै मा फेरि कार र मोटरसाइकल ठोक्किदा दुईजनाको मृ’त्यु, तीन घा’इते (57)
४.	भारतिय कोच भन्छन् : ‘साफ च्याम्पियनसिप नेपालले नै जित्छ’ (57)
५.	विप्लवका दाई वीरजङ्गको मृ’त्यु हार्दिक श्रदा’न्जलि (56)
६.	यस्तो छ तपाईको शुक्रबारको भाग्य! असोज २९ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् (51)
७.	श्रीमानले सुटुक्क श्रीमतीको ला’स ज’लाउन लगाएपछि,यसरी राम धु’लाई भेटे (भिडियो हेर्नुस्)। (51)